Fashilka Diblumaasiyadeed ee Villa Somalia iyo go’aankii Nicholas Haysom • Horseed Media
You are here: Home / Featured / Fashilka Diblumaasiyadeed ee Villa Somalia iyo go’aankii Nicholas Haysom
Fashilka Diblumaasiyadeed ee Villa Somalia iyo go’aankii Nicholas Haysom
January 2, 2019 - By: Maxamed Cismaan
Nicholas Haysom ayaa Wasaarada Amniga ee Federaalka Su’aalo ka weydiiyey danbiyadii ka dhacay Baydhabo ee la sheegay inay geysteen ciidamada Booliiska ee dowlada ka amar qaata kuwaasi oo ku shaqeeya mucaawinada ay ka helaan Qaramada Midoobay. Xafiiska UN-ka ayaa su’aalahan wasaarada weydiiyey maadaama ay sharuucda Qaramada Midoobay ka mamnuuceyso hay’adaha ay taageeraan inay geystaan danbiyada loo geysto shacabka sida dilalkii ka dhacay Baydhabo oo ay geysteen booliiska Baydhabo oo si toos ah uga amar qaadanayey dowlada Federaalka.
Jawaabta laga sugayey Dowlada Federaalka iyo Wasaarada Amniga ayaa ahayd inay beeniso ama sheegto inay tilaabo ka qaaday askarta danbiyada loo heysto balse noqotay inay soo saarto qoraalka la sheegay in dalka looga eryayo Wakiilka Qaramada Midoobay.
Dowlada Federaalka kama jawaabin dhamaan su’aalaha la xariira faro gelintii ay ku sameysay Baydhabo ee keenay dhiiga daatay, taasi oo muujineysa in dowlada Soomaaliya ku guuleysan weyday inay xataa iska fogeyso danbiyadii ka dhacay Baydhabo, balse dooratay inay weerar kala hortagto Qaramada Midoobay oo ah midda qaabilsan dhaqaalaha lagu bixiyo ciidamada AMISOM ee iyaga illaaliya oo qaarkood weliba loo heysto inay fuliyeen xarigii Mukhtar Robow.
AMISOM ayaa dhankooda si xirfadeysan durbaba iska fogeeyey inay wax lug ah ku lahayd wixii ka dhacay Baydhabo iyagoo illaalinaya sumcadooda iyo waliba dhaqaalaha Beesha Caalamka ka helaan ee loo soo mariyo Qaramada Midoobay, isla markaana ciidamadooda ka xijaabaya inay galeen falal jabinaya sharuucda caalamiga ah ee la xariira xaquuqul Insaanka.
Villa Somaliya ayaa la filayey inay qaadaan wadada Amisom oo ay iska fogeeyaan eedeynmaha loo heysto, hase yeeshee dusha u ridatay dhamaan danbiyadii ka dhacay Baydhabo, iyagoona ku goodiyey in UN-ka uusan soo faro-gashan arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya, sida lagu xusay waraaqdii kasoo baxday Wasaarada Arrimaha Dibada.
Xukuumada ayaa dooratay inay qaado tilaabadii ugu cusleyd ama ugu adkeyd ee loo yaqaan dhinaca diblumaasiyada “…Nuclear option…”, iyadoo u dhaqmeysa sidii dowladahihii militariga ama kali-taliska oo ah kuwa lagu yaqaan inay neceb yihiin in wax laga weydiiyo danbiyada ay ciidamadooda geystaan.
Waxaa hubaal ah in go’aankan uu saameyn weyn ku yeelan doono sumcadii Dowlada Federaalka ku lahayd Caalamka, xili uu dalka Soomaaliya yahay wadan kasoo kabanaya dagaaladii Sokeeye oo aan si dhab ah looga hirgelin dib u heshiisiin dhameystiran.
Ficilada cusub ee Dowlada Federaalka ayaa docda kale saadaal u ah waxa ay xukuumada ka damacsan tahay doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan Dowladaha xubnaha ka ah Federaalka gaar ahaan Jubbaland oo ay hada dhaq dhaqaaqyo militari ka socdaan iyo waliba tii Koonfur Galbeed ee reebtay saameynta xun oo aan weli la xalin.